भरतपुर महानगरमा रेनु दाहाल यति धेरी मतले पछि यस्तो अवस्था आयो ! • raradiodarpan.com
भरतपुर महानगरमा रेनु दाहाल यति धेरी मतले पछि यस्तो अवस्था आयो !
२ जेठ, भरतपुर ।
भरतपुर महानगरपालिकाको प्रमुखमा सत्तारुढ गठबन्धनबाट उम्मेदवार बनेकी रेनु दाहाल ५० मतले पछि परेकी छन् । ११ हजार ३२८ मत गन्दा नेकपा एमालेका विजय सुवेदीले ३ हजार ९४४ मत पाएका छन् भने दाहालले ३ हजार ८९४ मत पाएकी छन् ।
प्रमुख पदमा स्वतन्त्र उम्मेदवार जगन्नाथ पौडेलले १ हजार ५७२ मत पाएका छन् । उपमेयरमा सत्तारुढ गठबन्धनबाट उम्मेदवार बनेका नेपाली काँग्रेसका चित्रसेन अधिकारीले ४ हजार ४७६ मत पाएका छन् भने एमालेसँगको तालमेलमा राप्रपा उम्मेदवार हिमला गुरुङको ३ हजार ७० मत छ ।
ललितपुर महानगरपालिकामा नेपाली कांग्रेसका उम्मेदवार चिरीबाबु महर्जन र उपप्रमुखमा नेकपा (एमाले)की मञ्जली शाक्यको अग्रता कायम छ ।
पछिल्लो विवरणअनुसार, कांग्रेसका उम्मेदवार महर्जनले चार हजार ३१२ र एमालेका हरिकृष्ण ब्यञ्जनकारले दुई हजार ३८ मत पाउनुभएको छ । उपप्रमुखमा एमालेकी उम्मेदवार मञ्जली शाक्यले एक हजार ८८६ मत र नेकपा (माओवादी केन्द्र) का बाबुराजा बज्राचार्यले एक हजार ३१७ मत पाउनुभएको छ ।
महानगरपालिकामा २९ वडा रहेकामा हालसम्म एउटा वडाको मात्रै परिणाम आएको छ । शनिबार मध्याह्न १२ बजे मतगणना सुरु भएको थियो । हाल २, ३ र ४ वडा तीन ठाउँमा गणना भइरहेको छ ।
वडा नम्बर १ अध्यक्षमा स्वतन्त्र उम्मेदवार निर्मल तण्डुकार विजयी हुनुभएको छ । उहाँले ६६१ मत ल्याएर विजयी हुनुभयो भने उहाँका निकटतम प्रतिस्पर्धी नेपाली कांग्रेसका धु्रव तण्डुकारले ४२५ मत प्राप्तभएको थियो ।